Xaaji Dhurwaa hadalkiisa yaa dheg u dhigaya?!
Qof waajibkii Xajku ka dhacay ma dhihi karaa gumaystayaashii dhabarka naga rartay, Ingiriis baa dhaladkooda ah uguna laan-dheeraysan! Mise xaajigu waa kii la iska dhihi jiray ee ninka ka dhignaa? Waxay dhahaan waa nin ay Somaliland ay ku dhaadato oo ku dhex jira raggii dhidabbada u aassay, guurtinimana waa udheertay.
Horta raggii dhugta lahaa ee Ingiriis dhaayaha saaray issagoo dadkeena dhibaya aan fariintoodii dheehanno. Ina Gahayr wuxuu yiri Ingiriiska dhulkayga haysta iyo Jarmalkaba gaalaa dhashay isku dhan bayna iga jiraan. Dhuuni dartiis mid ma soo dhawaysan karo. Barkhad Cas dhoobadii Hargeysa oo Ingiriis ku salaqdhabanayo oo dadkii cabsi wadnaha u dhigay, markii wafti boqortooyada dhankeeda ka socdaa soo caga dhigtay, dadkii waxaa ganaax looga dhigay inay soo dhaweeyaan, isagu dhogarta Ingiriiska wuu dhibsaday oo wuxuu ku dhawaaqay siday awoowayaashii ay u dhabanaanayn jireen, shaabuugna ula dhici jireen. Sidaan buu u dhahay (ninkii aabahay adoonsaday, ninkaas aragiisa uurkaan ka nacee aan ooyee albaabka ii xira). Cali Dhuux wuxuu yiri: oo dhagaxan qaad iyo adeeg gaaladaa dhihine. Ma Talyaanuu indhaha saaray? Dhurwaagaas baa dadka waxgarad looga dhigayaa! Raggaasi waxaan maka dhegaysanlahaayeen? Marka Talyaani iyo Ingiriis isku meel dhig.
Dhurwaa anigu ma oran ee magaciisa ayaa ku dhaca. Horta wanaagga aad Ingiriiska u dhaamisay halkan soo dhig? Miyaan Sayidka canshuur dhiib la oran oo uusan ka dhiidhiyin halka dadku baad dhiibi jireen? Miyuusan Sayidku carruur macatab ku dhegenyahay ka dhifan markuu magacooda dhegaystayna ayna Laatiin ku dhawaaqin. Waxaas dhiigu nagu kicinayaa. Yaa Soomaaliya kala dhantaalay? Yaa Xarshin Amxaarada udhiibay? Yaa NFD Kenya hoos dhigay? Yaa inta dhulka kaa doofshay oo calooshi ushaqayste kaa dhigtay gaalo kale xabbad kuugu dhiibay?
Waa adiga Xaajiga isku dhajinayee Masjid Al-Aqsaa yaa Yuhuud u dhiibay? Yaa Ciraaq iyo Kuwayt dhibka kala dhexdhigay? Yaa khilaafadii Islaamka dhulka dhigay? Yaa Xaramaynkii boqortooyo udhiibay? Dhibta aduunkoo dhan ka dhacaysa yaa dhigay?
Xaaji Dhurwaa waxa dadka sharaf dhaca ku rida waa hadalka la iska dhaho adoon si fiican udhuuxin ama iska dhayalsada. Waxaad u dhaqmaysaa sidii aad Ingiriis ka dhuntay oo aad leedahay ninkii dhaxalka ii lahaa xaggiis hala ii dhigo sidii aan annaguna (Koonfur) kaaga dhaaranay oo aan teed idin kala dhexdhignay. Soow adigu xornimaa iga dhimman shirarka kama dhahaysid.
Mayd naftu ka dhacdo kaas godka lasii dhigayo ayaa ugu dambeeyey marka dhurwaayoow miyeysan Ingiriis iyo Maraykan ciidamo dhoobin Khaliijka si dhallaanka Ciraaq iyo shacab guryahooda dhacdiida hantidooda loo dhaxal wareejiyo kumannaanna udhintaan. Inkastoo Talyaanigu gaal kale yahay sida Ingiriiska nooma dhibi karo suu tabar saas ah naguma dhaamee.
Horay baan ussoo dhigay in reer Waqooyi qulatayn dhaafeen oo dhurwaa hadalladiisu wax uma dhimi karaan laakiin adiga iyo Ilmo Gahayr labo buug baan idin kukala dhigaynaa. Teeda kale reer Koonfur waxay ku dhiirranayaan inay Waqooyi oo dhan cay ku dhammooqaan ilayn adigiiba “Walawayntii” oo dhan baad aflagaado ku dhammaajaysay.
Hadalka saas looma dhaho. Kalmadda wanaag lagama soo dhambalan karo dhib gumaysi noo gaystay (Ingiriis baa ugu wanaagsan) . Waxay ka dhigantahay adoo cadaabaha (naaraha) mid ka mid ah naruura ka dhowra oo yiraahda taasaa loo babac dhigi karaa!
Ilayn Zenawi wuxuu dharbaaxada noola daba joogaa si aan ammaan u dhiibno.
Afeer: Maqaalkan wuxuu ku socdaa xaaji Cabdi Xuseen Waraabe oo shirkii beelaha rayadka ah ee Hargeysa ku yiri Talyaaniga ayaa Koonfur saas ugalay laakiin Ingiriisku isagaa ugu fiican waxa wax gumaystay. Haddii uu hadalka saas u yiri ama si udhow maqaalku isaguu ku socdaa laakiin hadday website-yadu hadalkiisa bedeleen maqaalku waa wax kama jiraan. Hana la gaarsiiyo fariintaas si aan qof kale waxaas oo kale meel fagaare ah uga oran.
Faafin: SomaliTalk.com | Feb 28, 2003
[Qoraaladii taxanaha ahee ee Cabiwaaxid Khaliif]